Fandavan-tena, fanoheran-tena… | NewsMada
Inona no tena maika sy zava-dehibe amin’izao? Na inona filaza, mbola ny ady amin’ny firongatry ny valanaretina Covid-19 ihany aloha no mila atrehina, ifampitsinjovana, ifanomezan-tanana… Tsy lavina, tsy azo odian-tsy hita fa miara-dalana amin’izany ihany ny fiainana andavanandro, ny fitadiavana, ny asa aman-draharaha… Izay ilay hoe mila mahay miara-miaina amin’ny aretina ny tena?
Na ahoana na ahoana, ny fahasalamana ihany no voalohan-karena. Haninona moa rehefa tsy salama? Tsy mbola fantatra tanteraka sy voafaritra mazava ny fivoaran’ny tsimokaretina Coronavirus mahatonga ny valanaretina Covid-19. Ao anatin’izany ny fisehoany, ny karazany, ny fifindrany… Arakaraka izany ny fomba fiaina? Na ny fepetra ampiharina, ny fomba fiady, na ny fomba fitsaboana…
Amin’izao valanaretina andiany faharoa mahery vaika kokoa izao: misy ihany ny tsy mahay miaina? Mety ho tafahoatra ny fitenenana ve ny hoe tsy miraharaha ny hafa, tsy mivaky loha…? Raha misy tsy salama miady amin’ny fahafatesana na efa nodimandry aza ve, ohatra, ao an-trano na eo an-tanàna, ndeha hitabataba sy hanakorontana ao anatin’izany? Eny, na toy inona fahamaizan’ny tena amin’itsy sy iroa.
Saingy tsy vitan’ny hoe hamoaka fanambarana na hitabataba fotsiny, hono, ny sasany amin’izao fa hihetsika. Hanao inona na haninona amin’izao fahasahiranana mianjady amin’ny vahoaka sy ny firenena izao? Ho hita eo… Tsy misy mpihaino, hono, amin’ny fitabatabana, ka te hojerena amin’ny hetsika. Sao, sanatria, ny fitabatabana lava tsy mitondra filaminana sy fitoniana no mahatonga ny tsy fisian’ny mihaino?
Tsy azo odian-tsy hita na hadinoina ho azy amin’izany fa ao anatin’ny ady aman’aina izao: misy ny marary, ny mamoy havana… Mila fandavan-tena sy fiombonana aina sy fo ny fiatrehana izany. Na ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana fotsiny aza, tsy fahazoana manao izay tian’ny tena na ny sitrapo. Izay ilay fandavan-tena na fanoheran-tena? Alohan’ny handavana na hanoherana ny hafa na izay mitranga…